:: My Little World ::: ဘယ်လိုလုပ်စားရင်ကောင်းမလဲ.....
မနေ့ ကတစ်နေကုန် အလုပ်ရှုပ်နေခဲ့တယ်။ ညပိုင်း အစ်ကိုကို ကြိုဖို့လေဆိပ် သွားတယ်။ အစ်ကို့အတွက် ငှါးထားတဲ့ နေရာလိုက်ပို့ တာ၊ ညစာစားတာနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ အချိန်က ည ၁ နာရီလောက် ရှိပြီ။ အထုတ်တွေ မဖွင့်နိုင်တော့ဘူး။ အဲဒီအထုတ်တွေထဲမှာ ကိုယ်မှာ လိုက်တာတွေ ပါတယ်ဆိုတာ ညနေပို်င်း အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ကတည်းက အိမ်က ပြောလို့ သိနှင့်နေပြီသား။ ထည့်ပေးလိုက်တာတွေ ကုိုယ်တစ်ယောက်တည်းဆို မသည်နိုင်မှာ သေချာတဲ့အတွက် အစ်ကိုတွေက အခန်းထဲ အရောက်ပို့ ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါ တော်ယုံသင့်ယုံပဲ ထည့်ပေးလိုက်တာလို့အမေက ပြောတာပဲ။
သရက်သီး အစိမ်း ၃ လုံးလည်း ထည့်ပေး လိုက်တယ်လို့ ပြောတယ်။ မရမ်းသီး အရင့်ကိုကတာ့ ထည့်ဖြစ်အောင် ထည့်ပေးလိုက်ပါလို့အသေအချာမှာ ထားခဲ့တာပါ။ မရမ်းသီးအမှည့် ရရင်ရော ထည့်ပေး လိုက်ရမလား မေးတာ ကိုတော့ မထည့်ပေးပါနဲ့ လို့ ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။အသီး နှစ်ထုတ်ပါတယ်။ တစ်ထုတ်က သရက်သီးနဲ့မရမ်းသီးအရင့်။
တခြား တစ်ထုတ်က မရမ်းသီး မနုမရင့်လေးတွေ။ မရမ်းသီး သိပ် မရင့်တာလေးတွေလည်း တစ်ခုခုပေါ့... မရမ်းသီးသုတ်၊ မရမ်းသီးထောင်း၊ မရမ်းသီးငါးပိချက်... ကုိုယ်စားချင်တာ လုပ်စားနိုင်အောင် ဆိုပြီးတော့ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်လို့အမေက ပြောတယ်။
သရက်သီး၊ မရမ်းသီးတွေကို ဘယ်လို လုပ်စားရင်ကောင်းမလဲ။ငါးသလောက်ဥ နဲ့ပုဇွန်ကို ရေခဲသေတာထဲ့ထည့်လိုက်တယ်၊ ကျန်တဲ့ အထုတ်တွေကတော့ သေချာ မရှင်းရသေးဘူး။ အကြော်အလှော် ၊ အခြောက်အခြမ်းတွေ ဆိုတော့ နောက်နေ့ မှ ရှင်းလို့ ရတယ်။
မရမ်းသီးဆို အစိမ်းကို ပိုကြိုက်တယ်။ အမှည့်ဆိုလည်း အချိုသီး ထက်စာရင် ချိုချဉ် အရသာကို ပိုနှစ်သက်တယ်။ ဒီနေ့မရမ်းသီးအကြောင်း လိုက်ဖတ်ကြည့်တော့မှ မရမ်းသီးက အရှေ့ တောင်အာရှက အသီးလို့ သိရတယ်။ ဒါဆို အနောက်ပိုင်း နိုင်ငံမှာ နေတဲ့သူတွေ မရမ်းသီး အစိမ်းစားရဖုို့မလွယ်ဘူးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မရမ်းသီးကို တခြားနိုင်ငံတွေကို တင်ပို့ ဖို့ထိုင်းအစုိုးရရ စိုက်ပျိုးသူတွေကို အားပေး ကူညီနေတယ်လို့ရေးထားတာတွေ့ လို့ဝယ်လို့ ရချင် ရနိုင်မယ်။ ဒါလည်း မရမ်းသီးအမှည့် (အချို ) တွေဖြစ်ဖို့ များမယ် ထင်တာပဲ။ ဒါနဲ့အင်တာနက်ပေါ် လျှောက်ဖတ်ကြည့်မှ မရမ်းသီး တင်မကဘူး၊ မရမ်းရွက်နုကိုလည်း ဆလတ်လုပ်စားတဲ့ အခါ ထည့်စားတယ်။ ထူးထူးဆန်းဆန်း အဲလိုမျိုး ကြားလဲမကြားဖူးသလို တစ်ခါမှလည်း မစားဖူးဘူး။
ဘာရယ် မဟုတ်ပါဘူး။ စားခွင့်ရတုန်းလေး မှတ်တမ်းလေး ရေးထားတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။
Bouea macrophylla is commonly known in as the Marian plum, Gandaria, and Plum mango.
Ma-praang and Ma-yong (Thailand),
Ramania and Gandaria (Indonesia),
မရမ်းသီး Mayun-Thee (Burma), and
Kundang, Rembunia, and Setar (Malaysia).
Posted by Nay Nay Naing at 3/07/2010 11:06:00 PM
Monday, March 08, 2010 2:10:00 AM
ဒီမရမ်းသီးပို့စ်ကို ဖတ်ရတာ သိပ်သိပ်ကို မုန်းတွဲှ့ကြောင်း
Monday, March 08, 2010 3:32:00 AM
ပုံကြည့်တာနဲ့တင်..စားချင်စိတ်တွေတစ်ဖွားဖွားဖြစ် လာတာ.. ငပိလေးနဲ့ထောင်းစားရသိပ်ကောင်းမယ်။ မစားရတာ နှစ်ချီနေပီ..
Monday, March 08, 2010 8:30:00 AM
နောက်လဆို ရန်ကုန်မှာ မရမ်းသီး ရှိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ဆို အမှည့်ရော အစိမ်းရော ပေါလောက်ပြီး။ အကင်းအနုလေးတွေတော့ ရှာရခက်မလား မသိဘူး။ သရက်သီး အစိမ်းတွေလည်း ပေါမယ် ထင်တယ်။
အိမ်ကို မရမ်းသီးမှာဦးမှပဲး)
Tuesday, March 09, 2010 9:59:00 AM
Saturday, November 12, 2011 11:36:00 PM